Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Andraikitry ny tsirairay ny fandriampahalemana” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : “Andraikitry ny tsirairay ny fandriampahalemana”
06/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Tsy andraikitry ny polisim-pirenena irery ihany ny fandriampahalemana , fa samy tompon’andraikitra ny isan’ambaratongany”, io no nolazain’ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny lahateniny omaly teny amin’ny ENSP Ivato, tamin’ny fanatanterahana ny famoahana, tamin’ny fomba ofisialy ireo polisy manamboninahitra miisa 48. Nambarany fa voakasika amin’izany avokoa ny tsirairay avy, ary tokony hifanome tanana amin’ireo polisy sy zandary ny rehetra, mba hisian’ny fandriampahalemana, sy ho fanajana ny fiandrianam-pirenena. Noamafisiny, fa tsy afa-misaraka amin’ny fampandrosoana ihany koa izany, ka io no anisan’ny antony goavana nanaovan’ny fitondram-panjakana ezaka amin’ny fanohanana sy fampitomboana isa ireo mpitandro ny filaminana. “Rariny raha hataon’ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny famoahana polisy tahaka izao, satria izy ireo no misahana ny fiarovana ireo olom-pirenena sy mitandro ny fanarahan-dalàna ary ny maha-olona sy ny zon’olom-belona”, hoy hatrany izy.
Eo ny famoahana ireo polisy vaovao, fa tsy hatao ambanin-javatra toraka izay koa ny fanatsarana ny fahaiza-manaon’izy ireo. Tsy hadinoina ny fanamboarana ny fotodrafitrasa toy ny Kaomisaria sy ny fanatevenana ny fitaovana omena ampiasain’ireo mpitandro ny filaminana ireo. Ankoatra ireo polisy 600 izay efa navoaka tamin’ity taona ity miampy an’izy 48 mianadahy mianaka ireto, dia nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa efa misy mpianatra ho polisy 740 indray niditra an-tsekoly sy manaraka fiofanana any Antsirabe hanampy sy hanatevin-daharana ireo izay efa am-perinasa ireo. Tamin’ity taona ity, dia nisy ihany koa ny ezaka lehibe nataon’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny fananganana biraon’ny polisy fito sy Kaomisaria miisa telo manerana an’i Madagasikara, ka anisan’izany ny kaomisaria foibe izay napetraka ao Mahajanga, izay ho tokanana tsy ho ela. Tanjon’ ny filoha ihany koa ny hahafahan’ny eo anivon’ny ministeram-bahoaka handray polisy arivo mahery, amin’ny volana jona ho avy izao. Nanentana ireo polisy vaovao andiany Fanilo sy ireo izay efa am-perinasa moa ny tenany, mba hanaja ny etika sy ny deontolojia mifehy io asa io, ary hitazona ny fahadiovan’izy ireo. Amin’ny maha raiamandreny lehibe azy ihany koa dia tsy hadinony no nitso-drano ireo polisy andiany Fanilo ireo mba ho reharehan’ny vahoaka malagasy.
Tsy mijanona ho tolona madio intsony araka izay nolazaina hatramin’izay ny zava-mitranga etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai, fa lasa mivadika zavatra hafa. Toa lasa mampihorohoro ireo mpikambana ao amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC) ...Tohiny
Camille Vital : Nopotehin-dRajoelina sy Ravatomanga